Akafira ‘speaker’ | Kwayedza
14 Feb, 2020 - 00:02	 2020-02-13T16:50:00+00:00 2020-02-14T00:14:36+00:00 0 Views
MURUME anogara kuChikanga, maMutare, anonzi akapondwa neshamwari dzake mbiri vachimupomera mhosva yekuba speaker yeredhiyo.
Mutauriri wemapurisa kudunhu reManicaland, Assistant Inspector Tavhiringwa Kakohwa, vanotsinhira nyaya iyi.
Vanoti Tendai Saunyama anonzi akarohwa zvakaipisisa nemhuro yemupuranga pamwechete nechamboko neshamwari dzake mbiri dzakangozivikanwa saMundenda naMuziyi.
Zvinonzi vatatu ava vainwa doro nekutamba mimhanzi vari pamba paMundenda.
Mushure mechinguva, Mudenda naMuziyi vanonzi vakabva vapinda mumba kuti vachizorora sezvo vakanga vadhakwa ndokusiya Saunyama ari pagedhi repamba apa.
Saunyama anonzi akabva asara nespeaker yavairidza iyo akazotora ndokuenda nayo kumba kwake senzira yekuichengetedza sezvo aizoda kuzoidzorera kushamwari dzake zuva remangwana racho.
Zuva rakatevera, Mundenda naMuziyi vanonzi vakabva vatevera Saunyama kumba kwake vachimupomera mhosva yekuba speaker.
Mundenda naMuziyi vanonzi vakatanga kurova Saunyama nemupuro pamwechete nechamboko zvikaita kuti akuvare zvakaipisisa.
Saunyama akazoendeswa kuchipatara cheMutare Central Hospital asi akashaya mushure mezuva rimwechete ari muchipatara.
Nyaya iyi yakamhan’arwa kumapurisa epaChikanga Police Station zvikaita kuti Mundenda naMuziyi vasungwe.
Asst Insp Tavhiringwa Kakohwa vanokurudzira varuzhinji kuti vasiyane netsika yekurwisana nekushandisa mhirizhonga kana vachinge vatadza kunzwanana.
“Isu semapurisa, tinokurudzira veruzhinji kuti vagare murunyararo uyezve kugadzirisa nyaya dzavo mune zvakanaka kwete kurwisana. Zvakanaka kutsvaga vanoyananisa kana vanhu vatadza kunzwanana,” vanodaro Insp Kakohwa.